सय किलो गाँजासहित ५ पक्राउ- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
संसारमा सबैभन्दा मिठो मुस्कान लाग्ने महिला ?
ठ्याक्कै यही महिलाको मुस्कान मिठो लाग्छ भनेर भन्न त सक्दिन । तर, कोही महिला रुन खोजिरहेका बेला अन्तिममा मुसुक्क मुस्कुराउँदा भने निकै मिठो लाग्छ । खासमा त्यो किसिमको मुस्कान निकै पावरफुल लाग्छ ।
सुरुमा युवतीलाई देख्दा तपाईंको आँखा कहाँ जान्छ ?
उनको अनुहारमा ।
युवतीको कुन अंगले तपाईंलाई आकर्षित गर्छ ?
मलाई नङ र कपालले धेरै आकर्षित गर्छ ।
मेरो श्रीमती हो ।
तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने महिला ?
मेरो आमा (प्रमेश्वरी देवी) । सायद, संसारमा हरेक आमाले आफ्ना सन्तानलाई आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छिन्, यो कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
कुनै महिलाका कारण जीवनमा परिवर्तन आएको महसुस गर्नुभएको छ ?
समाजसेवी मदर टेरेशा । सायद मदर टेराशाले प्रभाव पारेका मानिस धेरै हुनुहुन्छ ।
तपाईंको पालामा स्कुल पढ्ने बेला महिला साथीहरुसँग कत्तिको संगत हुन्थ्यो ?
खासै हुँदैन थियो । वास्तवमा म सानैदेखी लजालु स्भावको थिएँ । यहि स्वभावका कारण मसँग हेल्लो हाई गर्ने केटी साथीहरु समेत थिएनन् ।
पहिलोपटक डेट गएको युवती ?
आज पहिलोपटक यो कुरा भनिरहेको छु । म त्यतिबेला १५ वर्षको थिएँ । एकजना युवतीले निकै मन पराउँथिन । एकपटक उनले डेटिङकै प्रस्ताव गरिन् । मैले लाजकै कारण भेट्न गईन ।
भेटिएका महिलाहरुमध्ये सबैभन्दा सहयोगीको लाग्यो ?
श्रीमती रजनी थापा ।
कस्ता युवती देख्दा दिक्क लाग्छ ?
कुरा काट्दै हिँड्ने महिला मलाई मन पर्दैन । महिलाहरु गफको तालमा एकजनालाई दुईजनालाई तीनजनालाई गर्दै निकै सामान्य कुरा पनि गाउँभरी पुर्‍याउन सक्छन् ।
अहिलेसम्म कति युवतीलाई लभ लेटर लेख्नुभयो ?
अचम्मको कुरा हो, मैले लभ लेटर लेखेको याद छैन । बरु धेरै लेटर मैले पढ्ने मौका पाएको छु ।
संसारको सबैभन्दा आकर्षक लाग्ने युवती ?
प्रिती जिन्टा । मलाई उहाँ निकै मन पर्छ ।
कुनै युवतीले प्रस्ताव गरे भने डेटमा जान तयार हुनुहुन्छ ?
यस्तो कुरा त नभनौं क्यारे ।
कुनै महिलाका कारण आँसु बगेको क्षण छ ?
यो मामिलामा म संसारकै सबैभन्दा धेरै भाग्यमानी पुरुष हुँ । म महिलाकै कारण कहिल्यै रुनुपरेको छैन ।
अहिलेसम्म धेरै महिलासँग अभिनय गर्नुभयो, सबैभन्दा मन पर्ने अभिनेत्री ?
वास्तवमा कुनैपनि अभिनेत्रीलाई खोट लगाउने स्थान भेटेको छैन । तर, मैले सोचेभन्दा धेरै फरक पाएकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा हो । मैले सोचेको थिएँ, यो अभिनेत्रीले मलाई मतलब नराख्ने हो कि ? एटिच्युड देखाउने होला की ? नेपाली कलाकार भनेर हेप्ने पो हो कि ? तर त्यस्तो रहेनछ । वास्तवमा प्रियंका डाउन टु अर्थ लाग्यो । मैले मात्रै होइन, बलिउड र हलिउडमा उनि जम्नुको कारण पनि यहि स्वभावका कारण होला ।